WAR-CUSUB: Askar Taliyaani ah oo Muqdisho ku xusay maalinta ciidamada dalkaas – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamo Taliyaani ah ayaa maanta Muqdisho ku qabtay xuska markii la aasaasay ciidamada dalkaas, waxaana ka qeybgalay Ra’iisul wasaare ku-xigeenka ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya, Ridwaan Xirsi Maxamed oo ay wehliyaan xubno ka tirsan labada Gole ee dowladda iyo saraakiil ciidan.
Xafladaan oo lagu qabtay xarunta AMISOM ee Xalane ayaa waxa ka qaybgalay masuuliyiin ka socotay Midowga Yurub, safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya iyo marti sharaf kale, waxaana u jeedada xafladdu ay ahayd xuska maalinta ciidamada dowladda Talyaaniga iyo sidoo kale Midawgii shacabka Talyaaniga xilli laga joogo 96 sano.
Ugu horeyn Madaxda ka qayb gashay munaasabada ayaa waxa ay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada Talyaaniga ee qaybta ka ah ciidanka Midawga Yurub ee tababarka u jooga Soomaaliya.
Jeneral Massimo Mingiardi oo ah Madaxa tababarada Midowga Yurub ee Soomaaliya una dhashay Dalka Talyaaniga ayaa sheegay in u jeedka ay Soomaaliya ay u joogaan ay tahay sidii Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi lahayd, ayna sii wadayaan tababarada ay siinayaan ciidamada xoogga dalka.
Safiirka Dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Danjire Fabrizio Marcelli ayaa xusay in dowladda Talyaaniga ay ka go’antahay sidii ay u caawin lahaayen bulshada Soomaaliyeed, isla markaana aysan raali ka ahayn in Soomaaliya ay ku jirto dhibaato.
Ra’iisul wasaare ku-xigeen ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa dowladda Talyaaniga uga mahadceliyay taageerada ay siineyso shacabka Soomaaliyeed, isagoo ugu hambalyeeyay xuska maalinta ciidanka Talyaaniga.
“Munaasabadaan Muqdisho lagu qabtay waxa ay ka turjumeysa sida loogu guuleystay xoojinta amniga oo ay calaamad ka tahay nabadgelyada oo soo noqotay, tan kale anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda Soomaaliya waxaan jeclahay in aan Talyaaniga uga mahadceliyo taageerada ay siinayaan Soomaaliya, uguna hambalyeyno 4-ta November oo ah maalinta ciidanka Talyaaniga” ayuu yiri Ridwaan Xirsi Maxamed.
Dowladda Taliyaaniga ayaa qeyb ku leh saraakiisha tababarka ciidamada Soomaaliya, lamana oga tirada ciidamada ka jooga dalka.